Umkhuba wemikhono esongiwe | Amadoda aSitayela
Imikhono esongiwe, ukuthinta okomuntu siqu nokwe-sexy kwezikibha zakho
Le ntwasahlobo-ehlobo, yenza ngezifiso izikibha ezinemikhono emifushane. Phatha ifayela le- ugoqe imikhono Kungumniningwane olula, kepha, okuzokuzuzela amaphuzu ambalwa esikalini sesitayela.
Lolu hlobo lokwenza ngokwezifiso i- Amahembe amahembe amancane itholakala kunoma ngubani. Kumele unikeze imikhono eyodwa noma amabili ajike abheke phezulu, unake ukuthi umphetho awudluli ububanzi bomthungo wonqenqema lwemikhono, ngoba kuleso simo umphumela uyeka ukuba mnandi futhi uba yinto emangazayo nje.
Kumele kuqashelwe ukuthi amanye amahembe anemikhono emifushane adinga ukujikwa ngaphezulu. Lapho imikhono mide kakhulu noma ibanzi kakhulu (isitayela ngokweqile), uyihlanganise njengoba kunesidingo uze uzizwe indwangu ilingana nengalo yakho. Le yinqubo esetshenziswa yisithonjana sesitayela, uKhan West.
Uma une-tattoo engalweni yakho, imikhono esongiwe iyindlela yokukhombisa okuningi ngaphandle kokuya eziqongweni zethangi. Kusinika nomoya vintage - Uyamkhumbula uJohn Travolta ku-'Grace '? - ukuthi sicabanga ukuthi kuhle impela.
Imboni isonge imikhono
Uma kukhulunywa ngokulandela lo mkhuba, singakhetha futhi izikibha eziza nefayela le- imboni yagoqa imikhono, noma inketho yethu esiyikhethayo ukuthatha isikibha esijwayelekile bese sizigoqa ngokwethu. Futhi ukuthi esikuthanda kakhulu ngalolu daba ukuthi ukuthintwa komuntu siqu okufaka isandla ekunikezeni amahembe ethu, okuthile okulahleka kancane uma imikhono isivele ifike kanjalo efemini.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Imikhono esongiwe, ukuthinta okomuntu siqu nokwe-sexy kwezikibha zakho
Ukusika okufanele kakhulu kwezinwele ezinhle
Umehluko phakathi kwe-eau de toilette namakha